प्रहरीकै छोराको रहस्यमय मृत्यु : गम्भिरतापूर्वक अनुसन्धान नभएको गुनासो – The Public Today
प्रहरीकै छोराको रहस्यमय मृत्यु : गम्भिरतापूर्वक अनुसन्धान नभएको गुनासो
रामबाबु यादव भदौ ३०, २०७७ २:४६ pm
काठमाडौं, भदौ ३० गते । नेपाल प्रहरीकै एकजना सदस्यको छोराको रहस्यमय मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीले गाम्भिर्यता नदेखाएको पीडित परिवारले गुनासो गरेको छ ।
प्रहरीका अनुसार पोष्टमार्टम रिपोर्टमा डुबेर मृत्यु भएको उल्लेख छ । तर, परिवारले भने डुब्नु पर्ने अवस्था कसरी आयो ? भन्ने विषयमा खोजविन गर्न आग्रह गरेको छ । ‘अनुसन्धान गरेर आएको नतिजा हामीलाई मान्य हुन्छ तर, अनुसन्धान नै नगरी बोल्दा हामीलाई पीडामाथि थप पीडा भएको छ’, यादवले भने ।
‘पोखरीमा उनी साथीहरुसँग गएका थिए भने ती को हुन् ? यदि साथीसँग गएका थिएनन् भने कोसँग गए ? त्यो विषय प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामा किन पर्दैन ?’, मुसाफिरको प्रश्न छ ।
फरेन्सिक विज्ञहरुका अनुसार पोखरीमा डुबेको घटनामा मृतकको संवेदनशील अंग लगायतमा किराले टोकेर घाउ बनाएको हुन्छ । डायाटम परीक्षणमा पोखरीमा भएका किरा र झारको आधारमा परीक्षण गरेर त्यो मुखभित्र पसेको छ/छैन भन्ने जाँच हुन्छ ।
एसपी पंगेनी पनि डुबेर मृत्यु भए पनि कोहीसँग खेल्न जाँदा वा कसैले धक्का दिएको हुनसक्ने विषयलाई नकार्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं, कोही बच्चा नै गएको भए पनि अहिले डरले भन्न नमानेको हुनसक्छ ।’ अनलाइनखबर